Ibhari entle eManor, phakathi kweBayeux nolwandle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKatrine
I-cottage efanelekileyo kwiiholide zentsapho okanye amaxesha okusebenza ngocingo (ifayibha kunye ne-wifi ekhawulezayo, indawo yokusebenza kwelinye lamagumbi okulala).
Zivumele ube nomtsalane ngumtsalane welali yamatye entliziyweni ye-bucolic Norman emaphandleni, kunye nepropathi entle yenkulungwane ye-19 apho uya kuhlala kwindlu enkulu yasefama efakwe kakuhle.
Uyakuxabisa ukuzola, igadi enemithi ewele umlambo kunye nebhulorho yamatye, kunye nobutyebi bendalo, bembali kunye nenkcubeko yommandla wethu omhle (i-7km ukusuka kumanxweme okumisa, iikhilomitha ezi-6 ukusuka kwisixeko samandulo saseBayeux, iikhilomitha ezingama-20. ukusuka kwikomkhulu Norman of Caen).
Isakhiwo esingaphandle sizimele ngokupheleleyo kwindlu yethu yokuhlala, kwaye uya kuba kuphela ngabahlali.
Abantwana bakho banokudlala ngaphandle ngokukhuselekileyo kwaye ngaphandle kokuphazamisa nabani na, kwaye unokufumana isidlo sasemini / isidlo sangokuhlwa ngaphandle ngasese.
Indawo yokuhlala ibandakanya i-attic endala ye-125 m2:
-Igumbi lokuhlala le-50m2 kunye nekhitshi laseMelika, kunye negumbi lokuhlala elinesitovu somthi saseGodin
-Igumbi labazali le-40m2 elinebhedi ephindwe kabini kunye neebhedi ezimbini ezingatshatanga kwi-mezzanine, igumbi lokuhlambela elineshawa yase-Italian
- 35m2 igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela elineshawa yaseItali
I-Wifi – i-30 Mbps
5.0 · Izimvo eziyi-107
Embindini welali yamatye enqabileyo, uyakonwabela ukuhamba kwendlela yokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile, phakathi kwamasimi emithi yeapile, iinkomo ezitya amadlelo, izindlu zasefama zaseBessin kunye nonxweme olukufuphi.
Ukuba imbali kunye nenkcubeko inomdla kuwe, i-Omaha Beach, iSikhumbuzo saseCaen, iBayeux Tapestry kunye neCathedral, iDeauville, iMont St Michel ngamagama kunye neendawo eziya kukukhuthaza ngokuqinisekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Katrine
Iilwimi: Dansk, English, Français, Norsk, Svenska
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$395
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Le Manoir